Nokia 7+: အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံး Android One ဖုန်းကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည် Androidsis
Nokia သည် MWC 2018 တွင်ပြသမည့်အမှတ်တံဆိပ်များစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခမ်းအနားတွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏ဖုန်းအသစ်ကိုတင်ပြလိမ့်မည်။ အကြောင်း Nokia 7+ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစျေးကွက်၌စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောဖုန်း၏ version အသစ် ဒါပေမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာဒီဖုန်းအသစ်မှာပထမဆုံးပုံရိပ်တွေရှိပြီးသား။ လက်သည်း ကျွန်တော်တို့ကိုအရေးကြီးတဲ့အံ့အားသင့်စရာတွေနဲ့ကျန်ရစ်စေခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံများ.
ဘယ်သူမှမျှော်လင့်မထားတဲ့တစ်ခုခု ဒါပေမယ့် Nokia 7+ ၏ဤဓာတ်ပုံများတွင် Android One လိုဂိုကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဒီတော့ဖုန်းကဒီပရောဂျက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ဖို့ပထမဆုံးတံဆိပ်ဖြစ်လာတယ်။
Nokia သည်အစကတည်းက Android ကိုအသုံးပြုရန်အလောင်းအစားရှိသည်သုံးစွဲသူများအားအဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုများစွာအကျိုးပြုသည်။ သူတို့ဟာဂူဂဲလ်ရဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မှုဒုတိယအမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအလုပ်ကောင်းတစ်ခုလုပ်နေတယ်။ အခုတော့ ဒီ Nokia 7+ ဟာ Android One စီမံကိန်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ.
ခဲ့တာ ဤပုံများကိုလူသိများသော Evan Blass အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်မှလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ဒီပုံရိပ်တွေအပြင် Nokia ဖုန်းအသစ်ရဲ့ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်အချို့ကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ဘာကိုမျှော်လင့်နိုင်မလဲ?
ငါတို့က 6: 18 အချိုးအစားနှင့် rounded ထောင့်နှင့်အတူ9လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင်။ Processor တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေတယ် Snapdragon 6604 GB RAM နှင့် 64 GB Internal Storage ပါရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်ကင်မရာက 12x optical zoom နှင့်အတူ 13 +2MP ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ရှေ့တွင် 16 MP ကင်မရာကိုတွေ့ရသည်။ ဘက်ထရီအကြောင်းတော့မသိသေးပါဘူး။ ၎င်းသည်လျင်မြန်သောအားသွင်းမှုရှိလိမ့်မည်။
ဤ Nokia 7+ သည်မူရင်းဖုန်းထက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကတိပေးသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစျေးကွက်အပေါ်ဖြန့်ချိ။ လကုန်ပိုင်းတွင် MWC 2018 ၌ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်မည်။ Android One ရှိဖို့ပထမ ဦး ဆုံး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Nokia 7+ - Nokia ရဲ့ပထမဆုံး Android One ဖုန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေထွက်ပေါ်လာသည်
Android ကိုသတိရခြင်း: Music Player3[APK]